राजा महेन्द्रले किन रोके महाकवी देवकोटाको तलव (भिडियो सहित) - अन्वेषी मिडिया प्रा .लि.
राजा महेन्द्रले किन रोके महाकवी देवकोटाको तलव (भिडियो सहित)
अन्वेषण सम्वाददाता ४ महिना पहिले
नाम लक्ष्मीप्रसाद भए पनि महाकवी देवकोटा वास्तवमा सरस्वतीका प्रसाद थिए । लक्ष्मीको अभावै अभावमा उनले पुरै जिवन कटाउनु प¥यो । तर सरस्वतीको आर्शिवादले देवकोटामा अद्वितिय प्रतिभा थियो । उनले तीन महिनामा शाकुन्तल महाकाब्य, दश दिनमा सुलोचना महाकाव्य र एकै दिनमा कुन्जीनी लेखे।
त्यसैले त भारतीय महापण्डित डा।राहुल साङ्कृत्यायनले देवकोटा बुद्धपछिको सबैभन्दा ठूलो मानवअवतार भएको वताएका छन् । भारतका तीन प्रसिद्ध कवि जयशङ्कर प्रसाद, सुमित्रानन्दन पन्त र सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला तीन बराबर देवकोटा एक्लै रहेको पनि उनले वताएका छन् ।
तिनै ताका सोभियत उज्बेकिस्तानको राजधानी तासकन्दमा एसिया र अफ्रिकाका लेखकहरूको सम्मेलन हुने भयो । देवकोटा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै त्यहाँ पुगे । विश्व मञ्चमा देशको इज्जत वढाए । यता उनी फर्किन नपाउदै राजा महेन्द्रलाई कतिपयले कुरा लगाई दिए । देवकोटा त तासकन्द पुगेर कम्युनिस्टबाट भए छन् । यस सन्दर्भमा डा. गोविन्दसिंह राउत लेख्छन् -हनुमाने साहित्यकारले चाकरी गर्दै कुलपतिसमेत रहेका राजा महेन्द्रलाई अनेक कुरा लगाइ दिए । बस, राजाको हठ न हो । आफ्नो स्वीकृति विना तासकन्द पुगेको आरोप लगाउदै देवकोटाको तीन महिनाको तलब रोक्का गरि दिए । यो घटनाले उनलाई निरास बनायो । मन्त्रीपरिषद्का अध्यक्ष सुवर्णशमशेर राणा देखि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति बालचन्द्र शर्मासम्मको स्वीकृति लिएर उनी त्यहाँ गएका थिए ।
महाकवीको तलव रोक्का गरिएको घटना एक कान दुई कान गर्दै मिडियासम्म पुग्यो । यस सन्दर्भमा पाका पत्रकार भैरव रिसालले लेखकसंग भनेका छन् —कतावाट खवर आयो थाहा छैन । मेरो सम्पादकले समाचार वनाउन अह्राउनु भयो । मैले देवकोटासंग कुरा गरे । समाचार प्रकाशित भए पछि उहाँलाई तलव दिइयो । तर एक महिनाको पारिश्रमिक जरिवाना गरेर मात्र ।
एउटा प्रधानमन्त्री ः जसको नाममा मत मागेर नौ महिनामै हटाईयो
जव भारतीय मिडियाले कोइरालालाइ जेल हाल्नु पर्ने समाचार संप्रेषण गरे ‍...
जहाजवाट वारुद वोकेका थिए पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले
दिल्लीको त्यो भेट, जसले राजनीतिको कोर्स बदल्यो